Terraforming Mars: Hellas & Elysium Yakawedzera Digital Board Game - Gamepoint - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | May 11, 2022 | nhau, Vhidhiyo mitambo
Asmodee Digital yakazivisa kuti Hellas & Elysium, iyo nyowani yekuwedzera yeTerraforming Mars, yave kuwanikwa kune vese vatambi paPC, iOS uye Android.
Kukunda kwemunhu kwepasi dzvuku kunoenderera nemamepu maviri matsva, Hellas neElysium, uye mibairo yakagadziridzwa uye zviitiko zvakakosha zvinopa yakatowanda mikana. Terraforming Mars inowanikwa paSteam, GOG, Epic Game Store, uye Humble ye19,99 $. Terraforming Mars inowanikwawo paApp Store ye9,99 € uye paAndroid ne8,99 €. Munguva pfupi yapfuura, vateveri vaivewo nemutambo mu Bata Epic Mitambo Zvitoro zvemahara kukwanisa. Iyo nharembozha inoda iOS 10 kana yepamusoro kana Android 6.0 kana kupfuura.
Hellas uye Elysium - mamepu maviri matsva
Terraforming Mars yakavakirwa pabhodhi mutambo wezita rimwe chete uye yakagadziridzwa neyakaiswa kubva kune yekutanga mutambo mugadziri Jacob Fryxelius. Iyo inopa zvese zvirimo mubhodhi mutambo pamwe chete akasarudzika edhijitari maficha senge dhizaini musiyano. Kuwedzera kwekutanga, Prelude, yakatoburitswa.
Mumutambo uyu wekuchinja-based strategy, vatambi vanotungamira mubatanidzwa uye kukwikwidza nemamwe makambani kushandura Mars kuti ive pasi rinogarika kuburikidza nekuvaka zvivakwa, kushandiswa kwehunyanzvi hwekuita, uye manejimendi ane hungwaru ekugadzira zviwanikwa. Terraforming Mars inogona kuridzwa yega kana nevatambi vanosvika vashanu.
Hellas & Elysium inosanganisira zvinotevera zvitsva zvemutambo wekutanga. Mamepu maviri matsva, Hellas uye Elysium: Hellas inosanganisira Gungwa reHellas neSouth Pole, mabhonasi maviri matsva ekuisa: yekutanga inounza kudziya, yechipiri inobvumira vatambi kuchinjanisa megacredits matanhatu kune tirairi yegungwa. Zvisinei, unofanira kuita nokukurumidza, nokuti mukana wakadaro unongouya kamwe chete. Elysium, kune rumwe rutivi rwepasi, inopa mabhonasi akawanda anokosha ekuiswa, kunyanya paOlympus Mons nedzimwe nzvimbo dzinoputika. Vatambi vanofanirwawo kuwana izvi nekukurumidza kuti vasapotsa mukana.
Vatambi vachawanawo mikana mitsva yehungwaru sezvo kuwedzera kwacho kuchichinja mibairo uye zviitiko zvakakosha muTerraforming Mars, kubva kumubairo weSpace Baron uye Polar Explorer chiitiko muHellas kuenda kune yakasarudzika Estate Dealer chinangwa muElysium.
Iyo DLC Hellas & Elysium yave kuwanikwa kune vese vatambi: ye6,99 euros (Steam, GOG, Epic Game Store uye Humble) kana 3,99 euros (iOS) kana 3,49 euros (Android). Vatambi vanofanirwa kuve nemutambo wepasi kuti uwane izvo zveDLC.
TERRAFORMING MARS Big Box (Nordic) (LPFI7521) Dema * Parizvino hapana ongororo 133,90 EUR tenga
Kare Amigo: Mutsva Richard Garfield mutambo unowanikwa kubva munaJune
Inotevera Terra (LUNA): Kuparara kwemari kuseri kwemutambo wekutanga wekutamba-ku-kuwana
Ravensburger inopa odhiyo puzzle mutambo "echoes"
PUGB: Tamba Nzvimbo dzekurwira mahara: Ikozvino
Crowdfunding yeAqua Garden paKickstarter: bhodhi mutambo nezve yakanakisa aquarium
Nhau dzichangoburwa: mitambo yebhodhi, mitambo yemavhidhiyo, varaidzo
Stellaris kuwedzera Overlord: Sunungura yakagadzirira